War Deg Dega: Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan Oo La Filayo In Xilka Laga Qaado | Salaan Media
Aug 04 2013 Mogadishu (SM)- Warar badan oo isa soo taraya ayaa sheegaya in Wasiirka Arrimaha Gudaha C/kariin Xuseen Guuleed iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan uu khilaaf soo kala dhexgalay. Khilaafkaas oo la sheegay in uu salka hayo eedeymo xoog leh oo loo soo jeediyay Tarsan. Gudoomiye Tarsan ayaa waxaa lagu heystaa hadal kulul oo uu dhawaan ka sheegay dibad bax looga soo horjeeday weearkii Turkiga lagu qaaday. Hadalkaas ayaa dad badani ka cadhoodeen in uu gudoomiyuhu ku weeraray Odayaasha Beelaha Hawiye gaar ahaan beelaha wasiirku ka soo jeedo.
Sidoo kale warar laga soo xiganyo xubno ku dhow dhow arimahan ayaa sheegaya in Magaalada Muqdisho ka dhacay shir uu soo qaban qaabiyay guddoomiyaha gobalka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan. Shirka waxaa ka qaybgalay xildhibaannada baarlamaanka ee uu ka soo jeedo Tarsan iyo kuwa beesha Abgaal.
Sida ay sheegeen xubno ka qaybgalay shirka, waxaa looga hadlay cabasho uu soo jeediyay guddoomiyaha gobalka Banaadir Tarsan, taasoo kusaabsan in loo diiday ka qaybgalo shirarka looga hadlaayo ammaanka.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa magaalada Muqdisho si wayn u soo galay wararka sheegaya in Tarsan lagu badali doono guddoomiyaha maxkamadda ciidamada Hasan Mungaam.